Hello Nepal News » बार्सिलोनाले सालाह भित्र्याउने सम्भावना कति छ ?
बार्सिलोनाले सालाह भित्र्याउने सम्भावना कति छ ?
इंग्लिस क्लब लिभरपुलका स्टार फरवार्ड मोहमद सालाह स्पेनिस क्लब बार्सिलोना जान इच्छुक रहेको नेदरल्यान्ड्सका पूर्वखेलाडी स्जाक स्वार्टले बताएका छन् । आफ्नो करिअर दौरान आयाक्सबाट खेलेका ८२ वर्षीय स्वार्टले एक अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै बार्सिलोनाका नयाँ प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले पनि इजिप्टका फरवार्डलाई चाहेको खुलासा गरेका छन् ।
‘मलाई यो राम्रोसँग थाहा छ कि, कोम्यान सालाहलाई बार्सिलोनामा चाहन्छन् । र, सालाह पनि बार्सिलोना जान इच्छुक छन् । तर, मलाई थाहा छैन कि– यो कहिले हुनसक्छ,’ स्वार्टले भने ।
कोम्यानले सालाहमा मेस्सीकै जस्तो गुण देखेको र मेस्सीपछि बार्सिलोनालाई सालाहले डोहोराउन सक्ने स्वार्ट बताउँछन् । ‘कोम्यानले सालाहलाई मेस्सीको विकल्पका रूपमा हेरेका छन् । सालाहमा मेस्सीकै जस्तो धेरै गुणहरू छन्,’ स्वार्टले भने, ‘मलाई लाग्छ, सालाहले बार्सिलोनालाई अघि बढाउन सक्छन् ।’
स्वार्टले बार्सिलोनालाई मेस्सीपछि एक उत्कृष्ट खेलाडी चाहिने बताउँछन् । हाल टोलीमा रहेकामध्ये कोही खेलाडीले मेस्सीको अभाव टार्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘मेस्सीपछि बार्सिलोनालाई अघि बढाउन सक्ने खेलाडी मैले अहिलेको टोलीमा देखेको छैन । उनीहरूलाई एक उत्कृष्ट खेलाडी आवश्यक छ,’ स्वार्टले भने ।
प्रकाशित मिति २९ भाद्र २०७७, सोमबार १५:५१